Kulankii maanta Xildhibaannada Somaliland ay ku yeesheen Muqdisho oo la dhaliilay +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Kulankii maanta Xildhibaannada Somaliland ay ku yeesheen Muqdisho oo la dhaliilay +(SAWIRRO)
Kulankii maanta Xildhibaannada Somaliland ay ku yeesheen Muqdisho oo la dhaliilay +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa dhaliil ka dhalatay natiijada kulankii Talaadada maanta ay Magaalada Muqdisho ku yeesheen Xildhibaannada Somaliland ka soo jeeda ee ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ay ugu muhiimsan yihiin Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), Wasiirka Maaliyadda Somaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo Wasiirka Warfaafinta, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye).
Kulanka oo sidoo kale ay ka qaybgaleen Guddiga Wadajirka ee Diyaarinta Xeerarka Dhameystirka Sharciga Doorashooyinka Qaranka ayuu ujeedkiisu ahaa in Xildhibaanada Somaliland ka soo jeeda laga talageliyo dhabaha ay tahay in loo maro Doorashada Mudane-yaasha Labada Gole ee ka soo jeeda Somaliland, iyadoo markaasi la sameynayo guddi reer Somaliland ah oo arrimahaasi ka shaqeeya.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka ayaa qoraal uu soo saaray waxaa uu ku hambalyeeyay kulanka ay maanta isugu yimaadeen Wakiilada Somaliland ka soo jeeda ee ka tirsan Baarlamaanka Somaliya.
Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka ayaa sidoo kale qoraalka ku sheegay inay tani tahay horumar weyn oo laga gaaray helitaanka dhaqamada maamul wanaagga.
“Hambalyo Wakiilada ka socda Somaliland ee ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, ee maanta yeeshay kulanka wadatashiga ah. Waxay kaloo la kulmeen Guddiga Wadajirka ah ee Labada Gole. Waa horumar weyn oo laga gaaray helitaanka dhaqamada maamul wanaagga.” Ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed.
Hase ahaatee Senator Muxudiin Sheekh Cali Jaamac oo ka tirsan Senatorada Golaha Aqalka Sare ayaa Dowladda Federaalka ku eedeeyay in Xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland ku hayso sad-bursi, isla-markaana ay dad gaar ahi wadato.
Wuxuu sheegay in la sameeyay guddi aan lagala wadatashan Xildhibaanada, isla-markaana ay guddiga yihiin xubnaha ku dhow dhow Villa Somalia, si aynaan doorashada u noqon mid daahfuran.
Isagoo Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Muqdisho ayuu sheegay inaanay Dowladda Federaalka doonayn doorasho xor iyo xalaala, oo lagu soo dooranayo Xildhibaanada Gobolada Waqooyi.
Senator Muxudiin Sheekh Cali Jaamac ayaa carabka ku adkeeyay in la arki doono dad badan oo reer Somaliland ah, oo si weyn uga soo horjeeda warqadda lagu soo magacaabay guddigan, oo ka soo baxday Madaxtooyada, sida uu yiri.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo Xildhibaano kale ayaa ku raacay Senator Muxudiin Sheekh Cali Jaamac eedda uu u jeediyay Villa Somalia.
Si kastaba ha’ahaatee, xubnaha guddigan la dhaliilay oo kulankii maanta ka dhacay Magaalada Muqidsho lagu soo bandhigay ayaa Guddiga Wadajirka ee Diyaarinta Xeerarka Dhameystirka Sharciga Doorashooyinka Qaranka kala shaqayn doono dhabaha lagu soo dooranayo Xildhibaanada Somaliland, haddii aan dib u eegis lagu samayn.